IMacaa ikhulisa ukuzala futhi ilwa nemiphumela emibi yokuyeka ukuya esikhathini - i-Afrikhepri Fondation
Li-maca idabuka ePeru. Ikhula kuphela ethafeni eliphakeme kakhulu (phakathi kuka-3000 no-5000 m). Sekuyiminyaka engu-5000 XNUMX, i-maca isetshenziswe ngabantu bendawo yezindawo eziphakeme zasePeruvia njengomthombo wokudla oyi-premium. Phakathi kwama-Inca, impucuko ehlelekile futhi ethuthukile yasePeru, isitshalo se-maca sasaziwa ngamandla aso okwelapha. Ngaphambi kwempi, amaqhawe e-Inca ngabe adle isitshalo se-maca ukukhulisa amandla abo. Futhi izithunywa nezithunywa, okwakumele zihambe amabanga amade kakhulu nge-Inca Empire, zathola ama-maca enkosini yazo yama-Inca. Ukulandela ukunqoba ezwenikazi laseNingizimu Melika, nabaseSpain bajwayelana nalesi sitshalo. Amahhashi abo ayesebuthakathaka futhi engasakwazi ukuzala ngenxa yokuphakama okukhulu.
Abantu bendawo babeluleka ukuthi banikeze ama-maca amahhashi. Abanqobi bahlatshwa umxhwele yimiphumela kangangokuba babhekisa kuyo emibhalweni yabo. AbaseSpain baqala nokuqoqa intela yabo ngohlobo lwama-kilos maca, ayethunyelwa ekhaya likazwelonke laseSpain. Ngoba, eSpain, lesi sitshalo saziswa ngezimpawu zaso: i-maca isiza ukuthuthukisa inkumbulo, ukukhuthazela nokusebenza kocansi, futhi ilwa nokushoda kwegazi nokudangala. Kepha kancane kancane, i-maca yawela ekulibeleni eYurophu. Kuphela kuma-Andes ePeruvia, asikayeki ukusebenzisa i-maca.
Kuze kube yiminyaka embalwa edlule, le mpande, ekhulisa amandla ezocansi, ibithengiswa kuphela ezimakethe zasendaweni e-Andes. Eminyakeni engamashumi ayisithupha, ososayensi benza ucwaningo lwezitshalo ePeru. Bafunde lokho okubizwa ngokuthi "izitshalo ezilahlekile zase-Andes". IMaca ibingenye yalezo zitshalo ezilahlekile. Njengengxenye yalolu cwaningo, kwashicilelwa nencwadi, esize ukuletha ukunakekelwa kwe-maca futhi. Manje, ukuthandwa kwe-maca kuyanda, ngoba abantu bathola ithonya elihle langempela lalesi sitshalo kumandla, i-libido nokusebenza kocansi.
Esinye sezikhuthazi zamandla emvelo ezinhle kakhulu emzimbeni kusukela ku-Inca Empire, ekwenzeni ngcono inhlalakahle yethu sonke, impande ye-maca isiza ekunciphiseni ngamandla imiphumela emibi yempilo yanamuhla neye ubudala obudala ukwehla kwethoni yethu. NjengasePeru, nangokusebenza okuphezulu, i-maca kufanele idliwe ngohlobo lwe-100% kafulawa omsulwa, ongenamanzi, oshisiwe kanye nosimeme.
Imiphumela ezuzisayo ye-maca: kuye nakuye
Thuthukisa ukusebenza ngokomzimba nangokwengqondo
Qinisekisa amangqamuzana obuchopho ngokukhuthaza ukuvuswa kwengqondo, ukuhlushwa nokukhumbula
Ncipha ukucindezeleka okubangelwa ukugqithisa kokuphila kwanamuhla nokuqoqa ukukhathala
Phinda usebenzise inqubo yamaselula futhi ukhuthaze ukubuyiswa komzimba
Qinisekisa uhlelo lwe-endocrine futhi ngokwemvelo ukhuthaze ukukhiqizwa kwama-hormone ocansini wesilisa nowesifazane (testosterone ne-progesterone) ukuze:
ngokuphumelelayo ukulwa nokunciphisa kwesifiso, injabulo
ukwandisa amandla okuziphatha ngokobulili nokuzala
ukulwa nemiphumela emibi yokuyeka ukuya esikhathini, komzimba ...
IMaca isitshalo sasePeruvia esisetshenziswe kakhulu ngamaNdiya aseAndes ukuthuthukisa ukuzala kwabantu nezinkomo.
Ngo-1961, ososayensi bafunde izakhiwo ze-maca nomphumela wayo omuhle ekuzaleni. Ucwaningo olwenziwe yisifundiswa sasePeruvia (uDkt Chacon) lukhombise ukwanda kokuzala kwamagundane. Muva nje imiphumela emihle ye-maca ekuzaleni iboniswe ngezifundo eziningana (UDkt Gonzalez 2001, 2003).
Izinhlaka ezithuthukisiwe zokuzala
injongo: Ukunquma imiphumela ye-maca (Lepidium meyenii) kumapharamitha wesemina abhekele ukuzala. UMBHALI Doctor Doctor Gonzalez 2001, Institute for Altitude Investigations. ICayetano Heredia University. I-Peru
imiphumela: Ngemuva kokulashwa nge-maca abantu ababambe iqhaza kulolu vivinyo baba nokukhula kwevolumu yesimina, inani lamadamu ngokujuluka kwemvelo, inani lesidoda se-motile nokuhamba kwesidoda.
IMaca ilawula izitho ezibhekele ukukhiqizwa kwamahomoni, kusuka kwi-hypothalamus, ngokwenza kusebenze izindlala ze-pituitary ne-adrenal, okuholela ekukhuleni kwamazinga e-testosterone futhi, ngokujwayelekile, ibhalansi yehomoni (UDkt. Ley).
ukufunda: Imiphumela ye-maca (lepidium meyenii) kwisifiso sobulili (uDkt Gonzalez 2002 Universidad Cayetano Heredia, Perú).
INDLELA Amaviki ayi-12, okuhleliwe okungahleliwe, okulawulwa nge-placebo, nokuhlolwa kwecala ngokufana. Kulolu cwaningo, imiphumela yokwelashwa okusebenzayo okunemithamo ehlukene ye-maca yaqhathaniswa.
Incwadi ‰ IMIPHUMELA Eqenjini eliphathwe yi-maca, ngesonto 4% wamadoda akhombisa ukwanda kwesifiso sabo sobulili, kuyilapho emasontweni e-24,4 no-8, 12% bese kuthi u-40% uthole ukwanda kwe-libido .
I-Maca nokuya esikhathini
Inkinga eyisisekelo ngokunqamuka kokuya esikhathini ukungalingani kwamahomoni okwenzeka kulesi sigaba. Ngaphezu kwalokho, ukuguga kubangelwa ikakhulu yilesi sizathu. Umuthi ojwayelekile usetshenziselwa ukwelapha le nkinga nge-hormone replacement therapy (HRT) ngandlela thile ukukhokhela ukusweleka kwamahomoni abesifazane futhi ngaleyo ndlela kudambise izimpawu zokunqamuka kokuya esikhathini. Noma kunjalo, kunezingozi zokuhlaselwa yinhliziyo, umdlavuza webele, njll.
I-Maca iyindlela ehlukile yemvelo kulezi zindlela zokwelashwa ezibuyisela ama-hormone. IMaca ivuselela izindlala zomzimba ukuthi zikhiqize amahomoni adingwa ngumzimba. Kungakho i-maca isebenza kangcono kunezinye izindlela zemvelo noma ezingezona ezethula ama-hormone emzimbeni futhi ngaleyo ndlela ibangele ukuthi izindlala ziyeke ukukhiqizwa kwamahomoni.
I-Organic Maca evela ePeru 500mg - Amathebhulethi angama-340
Okusha okungu-4 kusuka ku- € 14,99
Thenga i- € 16,90
I-Extra Strong Maca Root 4000mg ngesilinganiso ngasinye (ukunikezwa kwezinyanga eziyi-6) - Maca Root Extract ...
Thenga i- € 12,99
I-Vitamaze® Maca Capsules Isikali Esiqinile 4000 mg + L-Arginine + Vitamins + Zinc, 240 Vegan Capsules of ...
Thenga i- € 20,97
Maca Root Capsules 4000mg - 180 Vegetarian and Vegan Capsules - 6 izinyanga ...
I-Black Maca 5000mg - Ama-capsules Yemifino engu-180 - Ukuhlushwa okuphezulu kweBlack Maca nge-L-Arginine kanye ...
I-NUTRALIA | I-Black Maca evela ePeru ilingana no-24.000 mg umthamo ngamunye we-1.200 mg nge-L-Arginine, iZinc ...
I-Biojoy Organic Maca Powder evela ePeru, iLepidium meyenii (1 kg)
Kugcine ukubuyekezwa ngoFebhuwari 26, 2021 11:32 PM